3. Siza kulungiselela uluhlu olucacileyo lwezibakala zemeko yakho onokuthi uziyise kwamanye amagqwetha ukuba asifanelekanga njengabameli bakho. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / benefits / 3. Siza kulungiselela uluhlu olufutshane lwezibakala zemeko yakho onokuthi uziyise kwabanye abameli ukuba asifanelekanga njengabameli bakho.
3. Siza kulungiselela uluhlu olufutshane lwezibakala zemeko yakho onokuthi uziyise kwabanye abameli ukuba asifanelekanga njengabameli bakho.
Matshi 22, 2017 benefitsUshiye uluvoUDerek Soltis
Ukuba asingomdlalo wakho njengommeli, siya kukuthumela ikopi yamanqaku ebesilungiselele ngexesha lodliwano-ndlebe lwethu. Kuya kudwelisa iinyani zemeko okuyo. Ungazisebenzisa ezi zinto ukuba ungathanda ukwenza udliwanondlebe namanye amagqwetha xa singakulungelanga ukuba ligqwetha.
1. Siza kujonga kuyo yonke imiba yezomthetho ojongayo.
2. Siza kudlula kwiiZokhuselo kunye nokhetho onalo.
Ngaba ndiyasifanelekela isi Asylum e-US?
Inkonzo enikezelwa ngumthetho